Gabdhaha Heegan ku guuleystay horyaalka kubadda Gacanta 2017-18+Sawirro
Wednesday, January 23rd, 2019 - 21:19:02
Saturday February 10, 2018 - 11:10:52 in Wararka by Hussein Hadafow
Gabdhaha kubadda Gacanta Heegan ayaa ku guuleystayhoryaalka kubadda Gacanta markoodi 8-aad taariikda, kadib markii barbaro ay la galeen dhiggooda Horseed.
Kulankan oo ahaa kulanki u dambeeyay horyaalka ayaa garoonka Wiish waxaa soo buuxdhaafiyay taageerayasha labada koox, waxaanaHeegan ay garoonka soo gashay iyadoo u baahan guul ama barbaro si ay u xaqiijiso hanashada horyaalka.halka Horseed ay rajadeedu ahayd kalioya in ay guul keenaan si loo dheelo kulan kale oo kala bax ah.
Labada koox ayaa garoonka kusoo bandhigtay ciyaar aad loo jeclaystay waxaana hogaankaciyaarta uu noqday mid aysan kooxi ku nasan waxaana qeybta hore lagu kala nastay 7-7.
Marki laysku soo laabtay Heegan ayaa 4 gool oo degdeg ah kaga yaabsatay Horseed waxaana bandhiga goolashaas hogaan u ahaa Xakiimo iyo Farxiyo Gureey oo ah labo laacib oo weerarkooda halis yahay, basle Horseed ayaa kadib15 daqiiqo muujisay soo kabasho wanaagsan waxayna ugu dmabayn la wareegeen hogaanka ciyaarta oo ay 1gool ku qabteen.
Garsooraha oo Seeriga afka ku haya Gabdhaha Horseed iyo taageerayaashooduna isu diyaarinayaan dabaaldega ayaa waxaagool deg deg ah oo cajiib ah ka dhalisay Xiddigada no-10 Xakimo taasoo ciyaarta ka dhigtay barbaro, waxeyna ciyaarta kusoo idlaatay 17-17.
Ma ‘ ahayn natiijo u wanaagsan Horseed oomarka siddeeda o xiriir ah hortooda lagu hoyday horyaalka marqaatina ay ka ahaayeen.
Xakiimo Cusmaan ayaa dhalisay 6 gool iyadoo kooxdeeda Heegan u xaqiijisay in ay daafacdaan horyaalka kubadda Gacanta Dalkakaas oo ay ku guuleysteen markoodi 8-aad oo xiriir ah, waxaana loo aqoonsaday laacibadda kulanka.
Sawiradda iyo Diyaarinta Xuseen Maxamed Hadaafow